अप्रील 12, 2019 अप्रील 12, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment औषधि, डा. राम बहादुर बोहरा, डोपान-डीएसआर
कुनै पनि एउटा औषधिमा कुनै दुई वटा औषधि मिश्रण गरेर बनाएको औषधि सस्तो हुनुको साथै बढी प्रभावकारी हुने गरेको छ । नेपालमा यस्ता औषधि उत्पादनमा रोक लगाएको भएपनि अहिले उत्पादन गर्न दिएको छ । हाल यस्ता औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीमा २ वटा कम्पनी देखिएको छ । अल्पविकसित राष्ट्रका जनतालाई उपचार गराउन यस्ता औषधिले रोग चाडो निको हुने गरेको पाइन्छ ।
यो औषधिमा Pantoprazole र Domperidone मिश्रण गरेर बनाएको छ । पैसाको हिसाबले पनि सस्तो हुने देखिन्छ । यो औषधि बिरामीलाई सेवन गराउदा गैस्ट्रोपरेसिस सम्वन्धित लक्षणलाई समेत हटाउदछ । पेट पोल्ने, मुखबाट अमिलो पानी आउने जस्तो समस्या देखिएमा, आन्द्रामा घाउ भएमा यो औषधिले राम्रो फाइदा गर्दछ ।
यस्ता औषधि सेवन गराउदा कहिलेकाही साइड इफेक्ट नदेखिएपनि कहिलेकाही चक्कर लाग्ने, शरीर चिलाउने, पखला लाग्ने, आँखामा असर हुनाले आँखा कमजोर देखिने, टाउको दुख्ने जस्ता समस्या देखिन सक्छ । कुनै पनि समस्या देखिएको खण्डमा डाक्टरसंग परामर्श लिएर उपचार गराउन सकिनेछ ।
कुनै पनि औषधि सेवन गर्दा डाक्टरको परामर्श बिना सेवन गराउदा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । तर लामो समयसम्म अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्तिको निर्देशनमा यस्ता औषधि चलाउ सकिनेछ । हाम्रो उद्धेश्य हरेक व्यक्तिले औषधि सेवन गराउदा हुन सक्ने साइड इफेक्टबारे जानकारी हुन सके समयमा डाक्टरसंग परामर्श लिएर उपचार सहज हुने देखिन्छ ।
*जुनसुकै औषधीको सेवन गर्नुपूर्व डाक्टरको परामर्श लिन जरुरी छ
← साबुन आँखामा पर्दा किन पिरो हुन्छ ?
तरकारीको रुपमा भान्टा खानुका फाइदाहरु →
मार्च 5, 2019 मार्च 5, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
धेरै बाँच्न चाहना भएमा यसो गर्नुहोस्
अप्रील 1, 2019 अप्रील 1, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
One thought on “औषधि डोपान-डीएसआर (Dopan-DSR) र यसको प्रयोग”
Pingback:एन्टीबायोटिक्स एमोक्सिसिलिन र यसको प्रयोग